R/Wasaaraha iyo Guddoonka Baarlamaanka oo Ka Hadlay Mooshinka
Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in mooshin uu ku tilmaamay "sharcidarro" laga soo abaabulay xafiiska Madaxweynaha.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in mooshinkaasi uu kala qaybiyey xubnaha baarlamaanka isla markaana uu caqabad ku noqday geeddi-socodka hiigsiga sannadka 2016-ka.
Hadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka dambeeyey markii maanta Golaha Baarlamaanka Soomaaliya uu fadhigii uu yeeshay lagu qaybiyey mooshin ku saabsan xil ka qaadista ra’iisal wasaaraha, hase ahaatee mar kale buuq ayaa hadheeyey, waxaan dhacday in xildhibaannada ka soo horjeeda mooshinkaasi inay jeexjeexeen markii Waraaqaha Mooshinka loo qaybiyey.
Xildhibaannada diiddan Mooshinka ayaa ku dooday inaan la marin habkii sharciga ahaa ee ay ahayd in mooshinada golaha loo qaybiyo, sidoo kale waxay ku tilmaameen inaanu sharciga waafaqayn mooshin la keenay ka hor inta aan la ansixinin Ajandaha golaha.
Warsaxaafadeedka ka soo baxay guddoonka golaha baarlamaanka ayaa lagu sheegay in in mooshinka la yaalla Guddoonka aan la guda-geli karin ajendaha ilaa iyo inta xal looga helayo xasilooni darrada iyo nidaam-darrada baaxadda weyn, sida hadalka loo qoray.
Xafiiska Madaxweynaha ayaan weli ka jawaabin eedaha ka yimid dhinaca Ra'iisul Wasaaraha iyo weliba war saxaafadeedka Guddoonka Baarlamaanka.
Hoos ka dhagayso warbixinaha muranka siyaasadeed.